November 1, 2021 - ApannPyay Media
အရင်က လေးစားအားကျခဲ့ရတဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် တယောက်ကို ဒဲ့ရေးကာမေးခွန်းထုတ်လိ်ုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
November 1, 2021 by ApannPyay Media
အရင်က လေးစားအားကျခဲ့ရတဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် တယောက်ကို ဒဲ့ရေးကာမေးခွန်းထုတ်လိ်ုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင် သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်က အထင်ကြီးပြီး လေးစားရတဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ကို အခုလို ဒဲ့ဆော် ပြောလိုက်ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်က . . . ” ဦးရေ…. တအား အထင်ကြီးပီး လေးးစားချစ်ခင်ခဲ့တာပါ၊ ဘာလို့လည်း ဒိတ်လွန်တဲ့အရက်တွေ သောက်လွန်းလို့ လူစဉ်မမှီရာကနေ ဉာဏ်ရည်ပါ မမှီတော့တာလား။ စိတ်မကောင်းဘူး၊ ဦးရေ “ဆိုပြီးတော့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှ ာအခုလိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးက ဘယ်သူကိုပြောတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါသလဲ ကျနော့အမြင်ကတော့ အကယ်ဒမီများရှင် ရန်အောင်ကို ပြောတယ်လို့ ထင်တာပါပဲ အားလုံး ကျန်းမာ ၊ ချမ်းသာ ကြပါစေ မြန်မာပြည်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံး အေးချမ်းနိုင်ပါစေ… … Read more
အရင်းအနှီး သိန်း ၃၀ ဖြင့်စတင်နိုင်သော လုပ်ငန်း ၂၁ မျိုး လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာထဲက လုပ်ငန်း (၂၁) ခု ကို ဖော်ပြထားသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် စဉ်းစားနေသောသူများ အတွက် အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် ပါဝင်ကူညီ စဉ်းစားပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်း(၂၁) မျိုးမှာ ၁။ ပင်မင်း၊ အဝတ်လျော် အိမ်အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ၂။ ခွေးထိန်းသိမ်း၊ သန့်ရှင်း နှင့် အစားအစာ (ခွေးဟိုတယ်) လုပ်ငန်း ၃။ ရေခဲမုန့်၊ သစ်သီးဖော်ရည် တွန်းလည်း ၄။ ဆင်းကဒ် နံပါတ်အလှ ဝယ်/ရောင်း ၅။ အုတ်စက်လုပ်ငန်း ၆။ အွန်လိုင်း ရှော့ပင် ( Online Shopping) ၇။ ရေသန့်လုပ်ငန်း ၈။ ခရီးသွား အေဂျန်စီ … Read more
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည ၁၂ နာရီမှာ အကျိုးပေးမြန်သော ပံ့သကူပစ်ပါ “အကျိုးပေးမြန်သော ပံ့သကူ´´ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည ၁၂ နာရီမှာ ပံ့သကူပစ်ပါ။ ကိုယ်တတ်နိုင်သည့် ပမာဏလေးကို စေတနာ များစွာဖြင့် ပံ့သကူပစ်ပါ။ ရရှိလာမည့်အကျိုးကို မမျှော်ကိုးပဲ ပစ်ပါ။ နောင်ဘဝရမည့်ကုသိုလ်၊ ယခုရမည့် ကုသိုလ် အသာထား ကြပ်တည်းနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ပံ့သကူလေးကြောင့် ရတဲ့သူပျော်သွားရင် ကိုယ်ပီတိဖြစ်ရတာက ချက်ခြင်းလက်ငင်းရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါ။ ငွေ ဖြစ်စေ၊ ဆန်အိပ်သေးသေးလေးဖြစ်စေ ပံ့သကူပစ်ပါသည်လို့ စာလေးရေးပြီး ပံ့သကူပစ်နိုင်ပါတယ်။ ရတဲ့သူလည်း လွတ်လွပ်စွာ ပျော်ရ ကိုယ်သည်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမရှိပဲ ဖြူစင်စွာလှူရလို့ ဘယ်လောက် ပီတိဖြစ်ရသလဲ….. ကိုယ်လှူမယ့် ပစ္စည်းကို ၁။ အိတ်နဲ့ ထည့်မည်ဆိုလျှင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အကြည်သုံးပါ။ (ဥပမာ။။ ဆန်တို့ သကြားတို့ ဆပ်ပြာမှုန့် … Read more
ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံး အစဥ်အလာ စကားများ ၂
ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံး အစဥ်အလာ စကားများ ၂ ၁ ။ သင်ဖြူးအိပ်ရာ ၊ ခေါင်းပေါင်းမှာ ထေးဖာ မသုံးနှင့် ။ ၂ ။ ရေလည်ခေါင်းပေါင်း မကောင်းတစ်လီ အင်္ကျီ လည်ခွံပြတ်စုတ် မချုပ်နှင့် ။ ၃ ။ ဥစ္စာမာန်အား ဤသုံးပါး ကိုယ်စား မပြုနှင့် ။ ၄ ။ လူကြီး မိဘ မိတ္တတစ်ထွေ မိုးမြေတစ်သင်း နေလမင်း မုန်းတင်းစကား မဆိုနှင့် ။ ၅ ။ သတင်းအရှိန် စည်းစိမ်ပညာကြီးသူမှာ ၀င်ကာမခိုသင့် ။ ၆ ။ သူ၏ ဦးခေါင်း တစ်ကြောင်း ကျည်ပွေ့ အရှေ့ထရံ ဤ ၃ တန် ခုန်ပျံမကျော်နှင့် … Read more
တုပ်ကွေးရောဂါအပေါ် အာနိသင်ရှိတဲ့ အစွမ်းထက် နာနတ်ပွင့်အကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်
အခုတစ်လော တုပ်ကွေးဖြစ်နေကြသူ​တွေများတဲ့အတွက် တုပ်ကွေးရောဂါအပေါ် အာနိသင်ရှိတဲ့ အစွမ်းထက် နာနတ်ပွင့်အကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ် ယခုဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ကူးစက်ရောဂါတွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ နာနတ်ပွင့်ပြုတ်ရေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာနတ်ပွင့်ဟာ တုပ်ကွေး ရောဂါကြောင့် ဖျားနာခြင်း၊အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်မှုများ၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊နှာစေးခြင်း အစရှိတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေအတွက်ဆေးစွမ်းကောင်းပါ။ အသုံးပြုပုံ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ပါ။ရေဆယ်ဖန်ခွက်ဆိုရင် နာနတ်ပွင့်(ပုံပြပါ)ကိုအပွင့်နှစ်ဆယ်ခန့်ထည့်ပါ။ပြီးရင်ငါးမိနစ်မှဆယ်မိနစ်လောက်ပြန်ပြုတ်ပေးပါ။ထိုနာနတ်ပွင့်ပြုတ်ရည်ကိုလူကြီး၊ခလေးအားလုံးသောက်ပေးပါ။ဖန်ခွက်တဝက်စီလောက်သောက်ပေးပါ။ ခလေးများကိုသကြားလေးအနဲငယ်ထည့်ပြီးဖျော်ရည်လေးသဖွယ်ဝင်အောင်တိုက်ပေးပါ။ယခုရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်သောက်ပေးပါ။ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။ထိုနာနတ်ပွင့်ပြုတ်ရည်သည် တုပ်ကွေးရောဂါအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။ အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ။ credit_to_original_writer crd အခုတစ္ေလာ တုပ္ေကြးျဖစ္ေနၾကသူ​ေတြမ်ားတဲ့အတြက္ တုပ္ေကြးေရာဂါအေပၚ အာနိသင္ရွိတဲ့ အစြမ္းထက္ နာနတ္ပြင့္အေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္ ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ကူးစက္ေရာဂါေတြအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္တဲ့ နာနတ္ပြင့္ျပဳတ္ေရအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။နာနတ္ပြင့္ဟာ တုပ္ေကြး ေရာဂါေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္း၊အသက္ရွုလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္မွုမ်ား၊ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ႏွာေစးျခင္း အစရွိတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါေတြအတြက္ေဆးစြမ္းေကာင္းပါ။ အသုံးျပဳပုံ ေရေႏြးပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ပါ။ေရဆယ္ဖန္ခြက္ဆိုရင္ နာနတ္ပြင့္(ပုံျပပါ)ကိုအပြင့္ႏွစ္ဆယ္ခန႔္ထည့္ပါ။ၿပီးရင္ငါးမိနစ္မွဆယ္မိနစ္ေလာက္ျပန္ျပဳတ္ေပးပါ။ထိုနာနတ္ပြင့္ျပဳတ္ရည္ကိုလူႀကီး၊ခေလးအားလုံးေသာက္ေပးပါ။ဖန္ခြက္တဝက္စီေလာက္ေသာက္ေပးပါ။ ခေလးမ်ားကိုသၾကားေလးအနဲငယ္ထည့္ၿပီးေဖ်ာ္ရည္ေလးသဖြယ္ဝင္ေအာင္တိုက္ေပးပါ။ယခုေရာဂါျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ တစ္ပတ္တစ္ခါေလာက္ေသာက္ေပးပါ။ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ။ထိုနာနတ္ပြင့္ျပဳတ္ရည္သည္ တုပ္ေကြးေရာဂါအားလုံးကိုကာကြယ္ေပးပါသည္။ အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ။ credit_to_original_writer crd
November 1, 2021 November 1, 2021 by ApannPyay Media
Novemberတစ်လတာလုံးအတွက်ကံကောင်းပျော်ရွှင်ငွေတွေဝင်စေသောယတြာ Novemberတစ်လတာလုံးအတွက်အောက်မှာဒါနပြုထားသောယတြာကိုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရုံဖြင့်ထိုတစ်လအတွင်းသင့်နှင့်တကွသင့်တစ်မိသားစုလုံးကောင်ခြင်းမင်္ဂလာအဖြာဖြာနှင့် အစစအရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းများရရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယတြာပြုလုပ်ပုံနေအိမ်ဘုရားမှာပဲပြုလုပ်ရပါ့မယ်ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ရဲ့အလယ်မှာ*ဟ*အက္ခရာကိုဆော့ပင် အနီဖြင့်ထင်ရှားအောင်ခပ်ကြီးကြီးရေးပါ*ဟ*အက္ခရာရဲ့ကွင်း၂ကွင်းထဲမှာလစ်ပိုတစ်ပုလင်းစီတင်ပြီးဘေးပတ်ပတ်လည်အဆင်ပြေရာရနှံ့မွှေးသောပန်းတစ်မျိုးကိုဝိုင်းပေးရပါ့မယ်ပြီးလျှင်လစ်ပိုပုလင်းတွေပေါ်မှာဖရောင်းတိုင်တစ်တိုင်စီစိုက်ပြီးထွန်းလှုပူဇော်ပါဗျာမှတ်ချက်လစ်ပိုပုလင်းအဆင်မပြေသူများSharkဗူးအသုံးပြုနိင်ပါတယ် ထိုသို့လှူပြီးလျှင် ဂုဏ်တော် ၉ ပါးကို ယုံကြည်သဒ္ဓါစိတ်ဖြင့် ပုတီး ၃ ပါတ်စိပ်ပေးပါ ဝတ်ချကန်တော့ခြင်း မေတ္တာပို့ခံယူခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ကျွနု်ပ်နှင့်တကွ ကျွနု်ပ်၏တစ်မိသားစုလုံးဒီနိုဝင်ဘာလတစ်လတာလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်အတိုက်အခိုက်အနှောင့်အယှက်အန္တရာယ်ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းစေကာလုပ်ကိုင်သမျှကိစ္စအဝဝတို့၌ကံကောင်းမှုများဖြင့်အဆင်ပြေအောင်မြင်စေပြီးငွေဝင်လာဘ်ရွှင်စီးပွါးအထူးတိုးတတ်ရပါလို၏ဟုဆုတောင်းပါဆရာဦးမင်းနိုင်နှင့်တကွ သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများအားအစဉ်ရှိခိုးဦးခိုက်လျက် ဒီယတွာpostကိုဖတ်နေစဉ်ဘယ်အချိန်ဘယ်နာရီဆိုတာကိုကော်မန့်မှာရေးခဲ့ပါဆရာဟိန်းB.A(Psy)ဗေဒင်နှင့်ဂမ္ဘီရယတြာအစီရင်ပညာ09-259059505ခရစ်တစ် Novemberတစ်လတာလုံးအတွက်ကံကောင်းပျော်ရွှင်ငွေတွေဝင်စေသောယတြာ Novemberတစ်လတာလုံးအတွက်အောက်မှာဒါနပြုထားသောယတြာကိုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရုံဖြင့်ထိုတစ်လအတွင်းသင့်နှင့်တကွသင့်တစ်မိသားစုလုံးကောင်ခြင်းမင်္ဂလာအဖြာဖြာနှင့် အစစအရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းများရရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယတြာပြုလုပ်ပုံနေအိမ်ဘုရားမှာပဲပြုလုပ်ရပါ့မယ်ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ရဲ့အလယ်မှာ*ဟ*အက္ခရာကိုဆော့ပင် အနီဖြင့်ထင်ရှားအောင်ခပ်ကြီးကြီးရေးပါ*ဟ*အက္ခရာရဲ့ကွင်း၂ကွင်းထဲမှာလစ်ပိုတစ်ပုလင်းစီတင်ပြီးဘေးပတ်ပတ်လည်အဆင်ပြေရာရနှံ့မွှေးသောပန်းတစ်မျိုးကိုဝိုင်းပေးရပါ့မယ်ပြီးလျှင်လစ်ပိုပုလင်းတွေပေါ်မှာဖရောင်းတိုင်တစ်တိုင်စီစိုက်ပြီးထွန်းလှုပူဇော်ပါဗျာမှတ်ချက်လစ်ပိုပုလင်းအဆင်မပြေသူများSharkဗူးအသုံးပြုနိင်ပါတယ် ထိုသို့လှူပြီးလျှင် ဂုဏ်တော် ၉ ပါးကို ယုံကြည်သဒ္ဓါစိတ်ဖြင့် ပုတီး ၃ ပါတ်စိပ်ပေးပါ ဝတ်ချကန်တော့ခြင်း မေတ္တာပို့ခံယူခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ကျွနု်ပ်နှင့်တကွ ကျွနု်ပ်၏တစ်မိသားစုလုံးဒီနိုဝင်ဘာလတစ်လတာလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်အတိုက်အခိုက်အနှောင့်အယှက်အန္တရာယ်ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းစေကာလုပ်ကိုင်သမျှကိစ္စအဝဝတို့၌ကံကောင်းမှုများဖြင့်အဆင်ပြေအောင်မြင်စေပြီးငွေဝင်လာဘ်ရွှင်စီးပွါးအထူးတိုးတတ်ရပါလို၏ဟုဆုတောင်းပါဆရာဦးမင်းနိုင်နှင့်တကွ သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများအားအစဉ်ရှိခိုးဦးခိုက်လျက် ဒီယတွာpostကိုဖတ်နေစဉ်ဘယ်အချိန်ဘယ်နာရီဆိုတာကိုကော်မန့်မှာရေးခဲ့ပါဆရာဟိန်းB.A(Psy)ဗေဒင်နှင့်ဂမ္ဘီရယတြာအစီရင်ပညာ09-259059505ခရစ်တစ် Novemberတစ္လတာလုံးအတြက္ကံေကာင္းေပ်ာ္႐ႊင္ေငြေတြဝင္ေစေသာယၾတာ Novemberတစ္လတာလုံးအတြက္ေအာက္မွာဒါနျပဳထားေသာယၾတာကိုတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္႐ုံျဖင့္ထိုတစ္လအတြင္းသင့္ႏွင့္တကြသင့္တစ္မိသားစုလုံးေကာင္ျခင္းမဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယၾတာျပဳလုပ္ပုံေနအိမ္ဘုရားမွာပဲျပဳလုပ္ရပါ့မယ္ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္ရဲ့အလယ္မွာ*ဟ*အကၡရာကိုေဆာ့ပင္ အနီျဖင့္ထင္ရွားေအာင္ခပ္ႀကီးႀကီးေရးပါ*ဟ*အကၡရာရဲ့ကြင္း၂ကြင္းထဲမွာလစ္ပိုတစ္ပုလင္းစီတင္ၿပီးေဘးပတ္ပတ္လည္အဆင္ေျပရာရႏွံ့ေမႊးေသာပန္းတစ္မ်ိဳးကိုဝိုင္းေပးရပါ့မယ္ျပီးလၽွင္လစ္ပိုပုလင္းေတြေပၚမွာဖေရာင္းတိုင္တစ္တိုင္စီစိုက္ၿပီးထြန္းလႈပူေဇာ္ပါဗ်ာမွတ္ခ်က္လစ္ပိုပုလင္းအဆင္မေျပသူမ်ားSharkဗူးအသုံးျပဳနိင္ပါတယ္ ထိုသို႔လွဴၿပီးလွ်င္ ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါးကို ယံုၾကည္သဒၶါစိတ္ျဖင့္ ပုတီး ၃ ပါတ္စိပ္ေပးပါ ဝတ္ခ်ကန္ေတာ့ျခင္း ေမတၱာပို႔ခံယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး က်ြႏု္ပ္ႏွင့္တကြ က်ြႏု္ပ္၏တစ္မိသားစုလံုးဒီႏုိဝင္ဘာလတစ္လတာလံုးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္အတိုက္အခိုက္အေႏွာင့္အယွက္အႏၲရာယ္ခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းေစကာလုပ္ကိုင္သမၽွကိစၥအဝဝတို႔၌ကံေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေစၿပီးေငြဝင္လာဘ္ရႊင္စီးပြါးအထူးတိုးတတ္ရပါလို၏ဟုဆုေတာင္းပါဆရာဦးမင္းနိုင္ႏွင့္တကြ … Read more
ရှဲပေးကြပါ “အင်းစိန် ဘူတာရုံလမ်းည​စျေးမှာ ​ကလေးငယ်တဦးပျောက်ဆုံး”
ရှဲပေးကြပါ”အင်းစိန် ဘူတာရုံလမ်းည​စျေးမှာ ​ကလေးငယ်တဦးပျောက်ဆုံး” ယနေ့ ည​နေ ၄နာရီ​လောက်က အင်းစိန်လမ်းနားက ဘူတာရုံလမ်းည​စျေးမှာ ​ကလေးငယ်တဦးပျောက်သွားခဲ့ကာ တွေ့ရင် ဖုန်း-09777231532 ကို ဆက်သွယ်​ပေးကြ ဖို့ မိသားစုဝင်တဦးက မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။ ယနေ့ ည​နေ ၄နာရီ​လောက်က အင်းစိန်လမ်းနားက ဘူတာရုံလမ်းည​စျေးမှာ ​ကလေးငယ်တဦးပျောက်သွားခဲ့ကာ တွေ့ရင် ဖုန်း-09777231532 ကို ဆက်သွယ်​ပေးကြ ဖို့ မိသားစုဝင်တဦးက မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။ ယနေ့ ည​နေ ၄နာရီ​လောက်က အင်းစိန်လမ်းနားက ဘူတာရုံလမ်းည​စျေးမှာ ​ကလေးငယ်တဦးပျောက်သွားခဲ့ကာ တွေ့ရင် ဖုန်း-09777231532 ကို ဆက်သွယ်​ပေးကြ ဖို့ မိသားစုဝင်တဦးက မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။ ယနေ့ ည​နေ ၄နာရီ​လောက်က အင်းစိန်လမ်းနားက ဘူတာရုံလမ်းည​စျေးမှာ ​ကလေးငယ်တဦးပျောက်သွားခဲ့ကာ တွေ့ရင် ဖုန်း-09777231532 ကို ဆက်သွယ်​ပေးကြ ဖို့ မိသားစုဝင်တဦးက မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။ … Read more
ဦးရေပြားယားယံခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း
ဦးရေပြားယားယံခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ဦးရေပြားယားယံခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အိမ်တွင်းကုသနည်း (၇) မျိုး သင်က ဗောက်ထခြင်းနဲ့ဦးရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတတ်တဲ့ မကြာခဏခေါင်းယားယံတဲ့ ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအကြောင်းအရာကသင့်အတွက်ပါပဲ။ အခုပြောပြပေးမယ့် အိမ်တွင်းကုသနည်းတွေထဲမှာ အချိန်ကုန်ငွေကုန်သက်သာစေပြီး ဦးရေပြားနဲ့ဆံသားကိုအားပြန်ဖြည့်ဖို့ ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြုလုပ်ရမယ့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်- ၁။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ခေါင်းယားခြင်းကိုကုသနိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ ရေရောပြီး အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆံသားကို အရင်ဆုံး သံလွင်ဆီအနည်းငယ်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးနောက် ရေနဲ့ရောဖျော်ထားတဲ့မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါအနှစ်ကို ယားယံနေတဲ့ဦးရေပြားနေရာတွေပေါ် အနည်းငယ်နှိပ်နယ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။ လိမ်းပြီး ၁၀ (သို့) ၁၅ မိနစ်အကြာမှာရေနဲ့ဆေးချပြီးခေါင်းလျှော်နိုင်ပါတယ်။ ၂။ ထောပတ်သီး နဲ့ ဌက်ပျောသီး ထောပတ်သီးနဲ့ဌက်ပျောသီးမှာ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ဦးရေပြားကို အာဟာရဓာတ်နဲ့အစိုဓာတ်တွေဖြည့်တင်း ပေးနိုင်တဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေပါဝင်ပါတယ်။ … Read more
အမြဲတမ်း ငွေမပြတ် စေတဲ့ “ယတြာ” (ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ပညာရပ်များထဲက တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်)
အမြဲတမ်း ငွေမပြတ် စေတဲ့ “ယတြာ” (ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ပညာရပ်များထဲက တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်) ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ပညာရပ်များထဲက တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် အမြဲတမ်း ငွေမပြတ်စေတဲ့ယတြာ နှင့် ဈေးဆိုင် အရောင်းဆိုင်မှာ ဧည့်သည်စည် ကားစေရန် ယတြာ တွေ ငွေဖလား ဒါမှမဟုတ် ကြေးဖလားတစ်လုံးထဲမှာ ငွေစက္ကူထဲက တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ငွေစက္ကူတစ်ရွက် ကိုဖြန့်ခင်းထားလိုက်ပါ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ငွေစက္ကူ အတိုင်းအတာနဲ့တွက်ပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်၊ တတ်နိုင် တဲ့လူအတွက်ကတော့ တစ်သောင်းတန်ပေါ့၊ဒေါ်လာနဲ့အလုပ်လုပ်နေသူဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ထည့်ပေါ့ ပြီးရင်အဲဒီငွေစက္ကူထည့်ထားတဲ့ဖလားထဲကို ရေဖြည်းဖြည်းခြင်းလောင်းထည့်ပါ ။ ရေစက်ခွက်ထဲကိုရေစက်ချတဲ့အခါလောင်းသလို မျိုးလောင်းထည့်ပါ ရေလောင်းနေတဲ့အချိုန်မှာ ဂုဏ်တော် ၉ ပါးကို ၉ ခေါက်ပြည့်အောင်ရွတ်နေပါ၊ ပြီးတာနဲ့ရေမြုပ်နေတဲ့ငွေစက္ကူပေါ်ကိုခေါင်းလောင်း တစ်လုံးတင်ထားလိုက်ပါ မကြာခဏ အဲဒီခေါင်းလောင်း ကိုယူပြီးတီးပါ၊ခေါင်းလောင်းတီးနေတဲ့အချိန်မှာလည်း ဂုဏ်တော် ၉ ပါးကို ၉ ခေါက်ပြည့်အောင်ရွတ်ပါ။ အဲဒီဓါတ်ဆင်ထားတဲ့ … Read more
ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ် ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ် ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ် ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ် ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ် ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို မိဘမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ပိုင်ဖြိုးသုကို … Read more